Ihe Ndị Kraịst Kwesịrị Knowma Banyere Afọ Jubili | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ihe Ndị Kraịst kwesịrị ịma gbasara afọ jubile
di Paolo Tescione - November 11, 2020
Jubilee pụtara mpi ebule na Hibru ma kọwaa ya na Levitikọs 25: 9 dị ka afọ izu ike mgbe usoro afọ asaa asaa gasịrị, maka ngụkọta nke afọ iri anọ na itoolu. Afọ nke iri ise kwesịrị ịbụ oge ememme na ị rejoụrị ọ forụ. Ya mere a ga-afụ opi ebule n'ụbọchị nke iri nke ọnwa nke asaa iji bido n'afọ nke iri ise nke mgbapụta.
Afọ jubile ga-abụ afọ ezumike nye ụmụ Izrel na ala ahụ. Mụ Israel ga-ezu ike n'ọrụ ha otu afọ ma ala ahụ ga-ezu ike ka o wee mịa nkpuru n'ụba mgbe ezumike ya gasị.
Jubilii: oge ​​izu ike
Afọ jubilii ahụ nwere nkwuputa ụgwọ (Levitikọs 25: 23-38) na ụdị ịgba ohu niile (Levitikọs 25: 39-55). A ga-ahapụ ndị mkpọrọ niile na ndị mkpọrọ n'ime afọ a, gbaghara ụgwọ ma weghachite akụ niile n'aka ndị nwe ya. Ọrụ niile ga-akwụsị ruo otu afọ. Isi okwu nke afọ jubilii bụ na ụmụ Israel ga-enye otu afọ ezumike maka Dinwenụ, na-amata na O gboro mkpa ha.
Enwere uru dị iche iche n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ nyere ndị mmadụ ezumike, mana ahịhịa ahụ etoghị ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike na ala ahụ. Site na ndokwa nke Onyenwe anyị nke afọ izu ike, ụwa nwere oge iji weghachite ma mepụta owuwe ihe ubi bara ụba karị na afọ ndị ga-abịa n'ọdịnihu.
Otu n’ime isi ihe mere ụmụ Izrel ji dọrọ n’agha bụ na ha edebeghị ezumike nke afọ ndị a dịka Onye-nwe nyere n’iwu (Levitikọs 26). N’adịghị izu ike n’afọ jubil, ụmụ Izrel kpughere na ha atụkwasịghị Onyenwe anyị obi na ọ ga-egboro ha mkpa ha, ya mere ha tara mkpụrụ nke nnupụisi ha.
Afọ jubilii na-ese onyinyo ọrụ Onyenwe anyị Jizọs agwụla ma zuo oke.O site n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Jizọs, Ọ na-anapụta ndị mmehie ụgwọ ha ji n'ụzọ ime mmụọ na n'agbụ nke mmehie. Mfin emi mme anam-idi] k ekeme ndikpu] n] mm] mbiba ndinyene ebuana ye ebuana ye Abasi Ete nnyu and ndiana ebuana ye ik] t Abasi.
Gịnị kpatara ịkwụ ụgwọ ji?
N’agbanyeghi na afọ jubile gụnyere ịtọhapụ ụgwọ, anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ịgụ nghọta anyị dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ banyere ịhapụ ụgwọ na ọnọdụ a. Ọ bụrụ na onye so n’ezinụlọ Izrel ji ụgwọ, ọ nwere ike ịrịọ onye na-akọ ubi ya ka ọ kwụọ ya ụgwọ dabere n’afọ ole tupu afọ jubilii. Mgbe ahụ, a ga-ekpebi ụgwọ ahụ site na ọnụ ọgụgụ ọka a tụrụ anya ga-ewepụta tupu Jubile.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere ụgwọ nke narị puku abụọ na iri ise, ma ọ dị afọ ise tupu Jubili, na owuwe ihe ubi ọ bụla ruru puku iri ise, onye zụrụ ga-enye gị narị puku abụọ na iri ise maka ikike ịkọ ala ahụ. N’oge jubile, ị gaara anabatala ala gị maka na akwụchara ụgwọ ahụ. Ya mere, onye ahụ zụrụ ahịa doro anya, ọ bụghị ya nwe ala ahụ kama ọ na-agbazite ya. A na-akwụghachi ụgwọ site na mkpụrụ nke ala na-emepụta.
Enweghi ike ima uzo esi amata ugwo ahia obula n’ubi obula, ma obu ihe kwesiri ekwenye na onu ahia elebara anya ufodu afọ ndi gara aba uru karia ndi ozo. N'oge Jubili, ụmụ Israel nwere ike ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ n'ịkwụ ụgwọ ha ji ụgwọ na iji mba ahụ mee ihe n'ụzọ zuru ezu. N’agbanyeghi, igaghi ekele onye nwe ulo maka igbaghara gi ugwo. Jubili bụ otu ụbọchị nke anyị "oriri na-ere ọkụ" taa. Ga-esoro ndị enyi nwee a celebrateụrị na a kwụọla nnukwu ụgwọ a.
Agbaghara ma ọ bụ kagbuo ụgwọ ahụ n'ihi na akwụgo ya n'uju.
Ma gịnị kpatara Afọ jubilii kwa afọ iri ise ọ bụla?
Afọ nke iri ise bụ oge aga-akpọsa ndị nile bi n'Israel nnwere onwe. Iwu ahụ bu n'uche iji baara ndị isi na ndị ohu niile uru. Ndi Israel ji ndu ha dika uche nke Onye-nwe-ayi Chineke, nani site na iguzosi ike n'ihe nye Ya ka ha nwere onwe ha ma ha nwere olile anya inwere onwe ha inwere onwe ha n'aka ndi nkuzi ozo.
Ndị Kraịst enwere ike ime ya taa?
Afọ jubilii metụtara naanị ụmụ Izrel. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị mkpa n'ihi na ọ na-echetara ndị Chineke ka ha zuo ike n'ọrụ ha. Ọ bụ ezie na afọ jubilii esighị n'aka ndị Kraịst taa, ọ na-enyekwa ọmarịcha foto nke nkuzi Agba Ọhụrụ banyere mgbaghara na mgbapụta.
Kraịst Onye Mgbapụta bịara ịtọhapụ ndị ohu na ndị mkpọrọ nke mmehie (Ndị Rom 8: 2; Ndị Galetia 3:22; 5:11). Debtgwọ nmehie nke ndị mmehie ji Onye-nwe Chineke ji n'ụgwọ n'obe n'ọnọdụ anyị mgbe Jizọs nwụrụ n'ihi anyị (Ndị Kọlọsi 2: 13-14), na-agbaghara ụgwọ ha ụgwọ ruo mgbe ebighi ebi n'oké osimiri nke ọbara Ya. Ndị nke Chineke abụkwaghị ohu, ha abụkwaghị ohu nke mmehie, ebe Kristi tọhapụrụ ha, yabụ ugbu a ndị Kristian nwere ike ịbanye n’izu ike nke Onyenwe anyị na-enye. Anyị nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ ugbu a iji mee ka ọrụ anyị dị Chineke mma maka na Kraịst agbagharawo ma gbaghara ndị Chineke (Ndị Hibru 4: 9-19).
Nke ahụ kwuru, ihe afọ jubilii na ihe achọrọ maka ezumike na-egosi Ndị Kraịst bụ na ezumike aghaghị iji akpọrọ ihe. Onye na-ere ure bụ nsogbu na-eto eto n’ụwa niile. Onye-nwe-ayi achoghi ka ndi nke Chineke mee arusi, na-eche na oburu na ha narita olu ha n’olu ha ma obu ihe obula ha neme, ha nwere ike igboro onwe ha mkpa ha.
Chineke, maka otu ihe kpatara ya, chọrọ ka ndị mmadụ pụọ na ngwa ha. Oge ụfọdụ ọ nwere ike ịdị ka ọ na-ewe awa iri abụọ na anọ site na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ọbụlagodi kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ iji lekwasị anya n’ife Onyenwe anyị. O nwere ike iyi ka ọ gara n'ihu ilekwasị anya na Onyenwe anyị kama ilekwasị anya na ụgwọ ọnwa anyị.
Otu o sina dị, n’afọ nke jubilii na-ekwusi ike mkpa ọ dị ịtụkwasị Onye-nwe anyị obi n’oge ọ bụla kwa ụbọchị, ọnwa na afọ nke ndụ anyị. Ndị Kraịst kwesịrị ịrara ndụ anyị dum nye Onyenwe anyị, onye bụ ebumnuche kasịnụ nke afọ Jubili. Onye obula nwere ike ichota oge izuru ike, gbaghara ndi ozo n’ihi nmehie ayi, ma tukwasi Chineke obi.
Otu ihe dị egwu nke ofbọchị Izu Ike bụ izu ike. N’ụbọchị nke asaa na Jenesis, anyị hụrụ Onye-nwe na-ezu ike n’ihi na Ọ rụchaala ọrụ Ya (Jenesis 2: 1-3; Ọpụpụ 31:17). Mmadu kwesiri izu ike n'ubochi nke asaa n'ihi na o di nso ma doo iche na ubochi oru ndi ozo (Jenesis 2: 3; Opupu 16: 22-30; 20: 8-11; 23:12). Kpụrụ izu ike na ụbọchị jubilii gụnyere izu ike maka ala ahụ (Ọpụpụ 23: 10-11; Levitikọs 25: 2-5; 11; 26: 34-35). Ruo afọ isii, ụwa na-ejere ụmụ mmadụ ozi, ma ụwa ga-ezu ike n’afọ nke asaa.
Ihe dị mkpa nke ikwe ka akụkụ ndị ọzọ nke ala ahụ pụta bụ n'eziokwu na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ ala ahụ aghaghị ịghọta na ha enweghị ikike ọbụbụeze na ala ahụ. Kama, ha na efe Onye-nwe-eze kacha elu, onye bụ onye nwe ala ahụ (Ọpụpụ 15:17; Lev. 25:23; Deuterọnọmi 8: 7-18). Abụ Ọma 24: 1 gwara anyị hoo haa na ọ bụ Jehova nwe ụwa na ihe nile dị n’ime ya.
Ezumike bu ihe di nkpa nke Baibul na ndu Israel. Ezumike pụtara na mkpagharị ha n'ọzara abịa na njedebe na Israel nwere ike ịnụ nchekwa n'agbanyeghị ndị iro gbara ya gburugburu. N’Abụ Ọma 95: 7-11, isiokwu a metụtara ịdọ aka ná ntị a dọrọ ndị Israel ka ha ghara ime ka obi ha sie ike dị ka ndị nna nna ha mere n’ọzara. N’ihi nke a, ha erubere isi na mgbanwe ahụ e kwere ha na nkwa maka ha.
Ndị Hibru 3: 7-11 weghaara isiokwu a ma nye ya echiche nke oge ọgwụgwụ. Onye dere akwukwo gbara ndi nke Kraist ume ka ha ba ulo ezumike nke Onye-nwe nyeworo ha. Iji ghọta echiche a, anyị aghaghị ịga na Matiu 11: 28-29, nke na-asị: “Bịakwutenụ m, unu nile ndị na-adọgbu onwe ha n’ọrụ na ndị e boro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Nyaranụ yok m, mụtakwanụ ihe n'ọnụ m, n'ihi na adị m umeala n'obi na m wedatara onwe m ala, unu ga-ahụkwa izu ike nye mkpụrụ obi unu ”.
Enwere ike izu ike zuru oke n'ime Kraịst
Enwere ike inwe ezumike taa site na Ndị Kraịst chọtara izu ike na Kraịst n'agbanyeghị ọnọdụ ejighị ndụ ha n'aka. Jizọs kpọrọ anyị òkù na Matiu 11: 28-30, a ga-enwerịrị ihe ọ pụtara na Baịbụl dum. Uche di otua ezughi oke ma oburu na ekwuru ya na obodo na ala ndi agba ochie gbara ndi kwere ekwe ochie nele anya ha (Ndi Hibru 11:16) bu ebe izu ike nke elu igwe ayi.
Oge ndị fọdụrụ na njedebe nwere ike bụrụ eziokwu mgbe Nwa Atụrụ Chineke nke dị umeala n'obi ma dịkwa umeala ga-aghọ "Onyenwenụ kachasị ndị nwenụ niile na Eze ndị eze" (Mkpughe 17:14), ndị 'nwụrụ n'ime Onyenwe anyị' nwere ike 'izu ike n'ọrụ ha. 'rue mgbe ebighi ebi' (Mkpughe 14:13). N'ezie, nke a ga-ezu ike. Mgbe ndị nke Chineke na-eche oge ahụ, ha nwere ezumike n’ebe Jizọs nọ ugbu a n’okwu gbasara ndụ ka anyị na-eche mmezu ikpeazụ nke izu ike anyị n’ime Kraịst, na Jerusalem Ọhụrụ.
Gini ka “Baibul” putara na ole osi nweta aha ahu?
Amaokwu Baịbụl dị ike ga-enyere gị aka inwe ndidi
Bible: gini bu nmekorita nke Nna na Okpara?
Kedu ihe kpatara o jiri dị mkpa icheta Ista n’oge ekeresimesi
Otu esi arịọ Chineke mgbaghara
5 ihe anyị na-amụta site na okwukwe Joseph na Christmas
Oge obula n’ime ndu anyi n’ime anyi kenekorita Chineke site na Baibul